Xildhibaan Khaliif "Guddoomiyaha Baarlamaanka xabsi ayaa la geliyay, waa loo diiday..." | Jowhar Somali News Leader
Home WARARKA Xildhibaan Khaliif “Guddoomiyaha Baarlamaanka xabsi ayaa la geliyay, waa loo diiday…”
Xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar ayaa sheegay in Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Mursal la geliyay xabsi guri, isagoo loo diiday inay u galaan Xildhibaanada.
Xildhibaanka oo ka hadlayay Munaasabad lagu soo dhoweeynayay Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in Xildhibaano badan laga soo celiyay Madaxtooyada iyo gurigii uu degenaa Guddoomiye Mursal.
“Waxaa idin sheegayaa Guddoomiyaha Baarlamaanka ee qabtay mooshinka aan ka keenay Madaxweynaha maanta waa maxbuus, waa ka xunnahay Madaxweyne weerarayo guddoomiye oo albaabada ka xirayo wax lala yaabo waaye”ayuu yiri Xildhibaan Khaliif.
Guddoomiye Mursal ayaa degan Guriga Martida Madaxtooyada ee loo yaqaano Villa Uganda oo ku dhex taal gudaha Madaxtooyada, una dhow Xafiiska Madaxweynaha, waxaana Guddoomiyaha uu degenaa xaruntaas tan iyo markii loo dirtay xilka.
War qoraal ah oo ay soo saareen Guddoomiye kuxigeenada Baarlamaanka ayaa waxay muujiyeen in Guddoonka labo u kala jabay, isla markaana Guddoomiyaha aanu awood u laheyn inuu keligiis go’aan gaaro, taasoo u muuqata in awooddii Guddoomiyaha ay la wareegeen
Xaalada siyaasadeed ee dalka ayaa saacadihii u dambeeyay noqotay mid cakiran, kaddib markii Mooshin laga geeyay Madaxweyne Farmaajo, waxaa mooshinka xil ka qaadista Madaxweynaha saxiixay illaa 92 Xildhibaan.
Previous articleGuddoomiye kuxigeenada Baarlamaanka oo soo saaray go’aano lagu go’doominayo Guddoomiye Mursal
Next articleDuqa Muqdisho oo la kulmay Wasiir Kuxigeenka arrimaha dibadda Talyaaniga